တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် စာရင်းပေးထားမှု ကိုးသိန်းနီးပါး ရှိသော်လည်း ငါးသောင်းဝန? - Yangon Media Group
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ကိုးသိန်းနီးပါးဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် စာရင်းပေးထားသော်လည်း ငါးသောင်းခန့်ပျက်ကွက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ်လတွင်ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူစုစုပေါင်း ရှစ်သိန်းကိုးသောင်း ခြောက်ထောင်ကျော်ဝင်ရောက် ဖြေဆိုရန် စာရင်းပေးသွင်းထားရာ ယခင်နှစ်ကထက် ဖြေဆိုသူငါး သောင်းခန့်တိုးလာခဲ့သော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လာရောက်မဖြေဆိုမည့်သူသည် ငါးသောင်းခန့်ပျက်ကွက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ပျက်ကွက်ရန် ခန့်မှန်းထား သော်လည်း စာရင်းပေးထားသည့် အတိုင်းစာစစ်ဌာနများ၊ စာဖြေလွှာများကို ပြုစုထားမည်ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
”ဒီစာရင်းကအစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရှိပြီ။ ဖြေဆိုတဲ့သူအရေအတွက်က တစ်နှစ်ကိုငါးသောင်း လောက်တိုးတိုးလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ပြီးပျက်ကွက်တာကလည်း ငါးသောင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ အရေအတွက်ကတော့မနည်းဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်ပျက်တာပေါ့။ ဒီနှစ်လည်း အဲဒီလောက်သွားမယ်လို့ မှန်းထားတာ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြော ကြားသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဖြေဆိုခဲ့သောစာမေးပွဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် စာရင်းပေးမှုမှာ ခုနစ်သိန်းခြောက်သောင်း ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ပျက်ကွက်မှုငါးသောင်း ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မတ်လတွင် ဖြေဆိုခဲ့သောတက္က သိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် စာရင်းပေးသွင်းသူ ရှစ်သိန်းလေး သောင်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး ပျက်ကွက်သူ ငါးသောင်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
”ဖြေတဲ့အရေအတွက်တိုးလို့ ပျက်ကွက်မှုကလည်း တိုးလာတယ်လို့မြင်တယ်။၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကဆို ရင်အရေအတွက်နည်းတယ်။သုံး သောင်းခွဲလောက်ပဲပျက်တယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အခြေခံပညာကျောင်းများမှ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေမှာ သုံးသိန်းသုံးသောင်း ကျော်ရှိပြီး ပြင်ပမှဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူဦးရေမှာ ငါးသိန်းခြောက် သောင်းလေးထောင်နီးပါးရှိနေ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အတိတ်ကို မေ့ထား၊ ရှေ့သို့သာ ဆက်သွား၊ မည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒီချုပ်ဆောင်ရွက်နေ ဟုဆို
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိသူကို ရှုံးနိမ့်သူက တရားစွဲဆိုခြင်းသည် အထူးအဆန်း မဟုတ်၊ အဖြစ်အပျက်??
မြန်မာနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းအကြား ဒီမိုကရေစီကျပြီး အားလုံးပါဝင်သော အသိုက်အဝန်းတစ်ခ?
အီဂျစ်သမ္မတ အယ်လ်စီစီကို အာဏာဆက်ပေးမည့်အပေါ် လူထုအချို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
မဲဆောက်-ဘန်ကောက် ခရီးသည်တင် ယာဉ်တိမ်းမှောက် မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ဦး သေဆုံး